प्रधानमन्त्रीको कोरोना प्रेस्क्रिप्सन सुनेपछि……. « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
प्रधानमन्त्रीको कोरोना प्रेस्क्रिप्सन सुनेपछि…….
प्रकाशित मिति : २०७७, ७ बैशाख आईतवार ०८:३४
हुन त काका पनि मानार्थ पिएचडी हुन् । स्वास्थ्यका कारणले अस्पत्ताल र डाक्टरहरुको संगत भएको धेरै वर्ष भो । यसै मौकामा कोरोना भाइरसबारे प्रवचन दिएछन् । भिडियो सुनौं । देशको प्रधानमन्त्रीले भनेपछि त होला नै भन्नु पर्यो ।
सत्तामा पुगेपछि नेताहरुलाई सबै कुराको विज्ञ भएको भान हुँदो हो । राणाकालमा पद्म समसेर चुरोटबाट हुनसक्ने हानीका बारेमा गोरखापत्रमा स्थास्थ्य उपदेश नै छपाएका थिए । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई आन्द्रामा क्यान्सर लागेको भनेर त्यसबेलाका स्वास्थ्यमन्त्रीले मिडियालाई जानकारी दिएको तर पछि जापान गएर जचाउँदा केही नभएको पाइएको थियो । त्यो प्रकरणमा राज्यकोशको ७० लाख रुपैँया सिद्धिएको थियो । दुई हप्ताअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना लागेमा chloroquine phosphate खाए हुन्छ भनी प्रेस मिटमै भन्दिएकाले chloroquine खाने कतिपय अमेरिकीहरुको मृत्यु नै भइसक्यो ।
प्रधानमन्त्रीले दिएको कोरोना भाइरससम्बन्धी उपदेशलाई स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुले गलत सल्लाह भनिदिएछन् । जनतालाई पो क्या फँसाद् — प्रधानमन्त्रीले भनेको कसरी नमान्नु, फेरि डाक्टर त्यो गलत हो भन्दैछन् ।